यी राशि हुने प्रेमी/प्रेमिका कहिले पनि छुट्दैनन् । थाहापाइराख्नुहोस् »
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका प्रेमी प्रेमिका कहिलेपनी छुट्दैनन् । उनीहरूको सम्बन्छ एकदमै बलियो हुन्छ । शास्त्रका अनुसार नै १२ राशि रहेका हुन्छन् । ती राशि अनुसार मानिसको स्वभाव आचरण फरक रहेको हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानिसहरूको प्रेम सम्बन्छ पनि फरक फरक हुने कुरा ज्योतिषहरू बताउँछन् । त्यस कारणले कुन कुन राशिका व्यक्तिहरूको प्रेम सम्बन्ध बलियो हुन्छ त? हेर्नुहोस् उक्त राशिफलहरूः
मिथुन र तुला : मिथुन राशी र तुला राशीको प्रेम सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको छ । यी दुई राशी भएकाहरुको शारिरिक वा मानसिक दुवै रुपले मिल्ने हुन्छन्।सिंह र तुला : यी दुई राशी भएका व्यक्तिहरु पनि सामाजिक रुपमा निकेै मन पराइन्छ। समाजमा आकर्षक भएर प्रस्तुत हुने हुँदा यो जोडीलाई सबैले आकर्षकको केन्द्र बनाएको हुन्छन्।
मेष र कुम्भ : हरेक समय एक अर्कालाई साथ दिने भएकाले यी दुई राशी भएका व्यक्तिहरु एक अर्काप्रति आकर्षक हुने गर्छन्।. वृष र वृश्चिक : एक अर्कालाई सम्मान गर्ने भएकाले यी दुई राशी भएका व्यक्तिहरु नेतृत्वको विषयमा कहिल्यै झगडा गर्दैनन्।. वृष र कन्या : यी राशी भएका व्यक्तिहरु एक अर्कालाई बुझ्ने र बुझाउन सक्ने भएकाले निकै राम्रो मानिएको छ। उनीहरुले घर परिवारमा स्थिरता आवश्यक हुने गर्छ।
सिंह र धनु : एक अर्काको बिचमा आत्माविश्वास बढी रहेकाले दुवैले सक्दो सहयोग गर्ने गर्छन्। कन्या र मकर : यी दुई राशी भएको व्यक्तिहरु आफ्नो सम्बन्धमा इमान्दार हुने गर्छन्। एक अपसमा कहिल्यै झुट नबोल्ने भएकाले उनीहरुको सम्बन्ध बलियो हुन्छ।
मिथुन र कुम्भ : जीवनभरी हरेक उतारचढावलाई आपसको समझदारीमा पार गर्ने भएकाले उनीहरुको सम्बन्ध बलियो हुन्छ।
यी ४ राशिका महिला विवाह पछि श्रीमानको घरमा राज गर्छन् । जानिराख्नुहोस्